RASMI: Vincent Kompany Oo Shaqadiisii Tababaranimo Ee Ugu Horaysay Helay Isla Markii Uu Ku Dhawaaqay Bixitaankiisa Man City. - Gool24.Net
Kabtankii kooxda Manchester City ee Vincent Kompany ayaa haddaba helay shaqadiisii ugu horaysay ee tababaranimo isla waqtigii lagu dhawaaqay in uu Etihad Stadium ka baxayo.
Vincent Kompany oo waqti layaableh ku soo qaatay Man City isla markaana lagu sifayn karo hayaygii iyo hogaamiyihii ugu saamaynta badnaa taariikhda Man City ayaa ugu danbayn ka bixi doona Etihad Stadium.
Laakiin kooxdii Vincent Kompany soo saartay soona barbaarisay ee Anderlecht ayaa soo dhawayn layaableh u samaysay Kompany waxayna siisay laba shaqo oo isku lamaan isaga oo noqon doona ciyaartoy iyo Tababare.
Kooxda dalka Belgium ka dhisan ee Anderlecht oo ka mid ah kooxaha warshada wax soo saarka ciyaartoyda ayaa Kompany siisay fursad uu kooxdiisii carruurnimo ugu soo laabto isaga oo ciyaartoy ah balse sidoo kale tababarena u noqon doona.
Kompany oo ka hadlaya go’aanka uu ciyaartoyga iyo tababaraha ugu noqon doono kooxdiisii caruurnimo ee Anderlecht ayaa yidhi: “Seddexda sanno ee soo socota waxaa door ciyaaryahan iyo tababare ka qaban doonaa kooxda Anderlecht”
“Arintaan la yaab ayay idinku noqon doontaa. Laakiin waa go’aan aan ka fekeray islamarkaana xamaasad ay ii geysay
“Ciyaaryahan ahaan, waxaan ku dhashay kuna soo barbaaray RSC Anderlech. Tan iyo markii aan ahaa lix sanno jir aaya la joogay kooxda. Taariikh 34 horyaal ah ma jiraan wax u dhigma.” ayuu Kompany hadalkiisa sii raaciyay.
Halkan ka daawo qaabkii ay kooxda Anderlecht ugu dhawaaqday heshiiska ciyaartoy iyo tababaranimo ee ay Kompany la gaadhay.
Kompany ayaa 360 kulan u saftay Manchester City tan iyo markii uu kaga soo biiray kooxda Hamburg bishii Agoosto 2008 isagoo u dhaliyay 20 gool.
Kompany waxa uu Manchester City la qaaday afar koob oo horyaalka Premier League ah, labo FA Cup iyo afar koob oo League Cup ah.